जगदीश घिमिरे - विकिपिडिया
नेपाली लेखक तथा साहित्यकार
जगदीश घिमिरे (विसं २००२- २०७०) नेपाली लेखक तथा साहित्यकार हुन् । क्यान्सरले सिकिस्त भएर मृत्युशैयाबाट लेखेको आफ्नो आत्मवृर्तान्त "अन्तर्मनको यात्रा"बाट धेरै ख्याति कमाएका घिमिरे लामो समयदेखि सामाजिक कार्यमासमेत संलग्न थिए।
२००२ साल चैत्र २८ गते
२०७० साल कार्तिक १४ गते (६८ वर्षको उमेरमा)
लेखक, सामाजिक कार्यकर्ता
एम्. ए. समाजशास्त्र
पोष्ट ग्य्राजुएट, जनसङ्ख्या
जीवनी, फिक्सन, इतिहास
मदन पुरस्कार, उत्तम शान्ति पुरस्कार
जगदीश घिमिरेको जन्म वि.सं. २००२, चैत्र २८ गते, रामेछाप जिल्लाको मन्थली भन्ने गाउँमा भएको हो। उनले प्रारम्भिक शिक्षा नेपाल र उच्च शिक्षा भारत र बेलायतबाट प्रात्त गरे। सानैदेखि उनको अभिरुचि साहित्य र पत्रकारितामा थियो। त्यसैले उनले समाजशास्त्रमा एम्. ए. र जनसङ्ख्यामा पोष्ट ग्य्राजुएट डिप्लोमा गरेका छन्। राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूमा उनको लामो संलग्नता रहेको छ जसमार्फत उनले रामेछाप जिल्लाको सामुदायिक विकासमा ठूलो सहयोग पुर्याएका छन्। साहित्यिक र सामाजिक कार्यमा संलग्न हुने क्रममा उनले नेपाल, भारत, पाकिस्तान, श्रीलङ्का, केन्या, बेलायत, सिङ्गापुर, फ्रान्स, युगोस्लाभिया, थाइल्याण्ड जस्ता थुप्रै देश भ्रमण गरिसकेका छन्। रामेछापमा विकास निर्माण र सामाजिक उत्थानको कार्य गर्दा घिमिरेले धेरै बाधा-विरोधहरूको सामना गर्नुपर्‍यो। तरपनि उनी निरन्तर रूपमा समाज रूपान्तरणको काममा लागिरहे।
जगदीश घिमिरेमा निहित संवेदनशीलताले उनलाई एक मार्मिक सिहित्यसर्जक मात्र बनाएन एक सहृदयी विकासअभियन्ता पनि बनायो। सामाजिक कार्यमा घिमिरेलाई पत्नी दुर्गाले पनि उतिकै साथ दिइन्। एबीसी नेपालमा कार्यरत दुर्गा घिमिरे ती प्रथम महिला मध्येकी हुन् जसले बेचिएका नेपाली चेलीबेटीलाई मुम्बईबाट उद्धार गरेर ल्याउने साहसिक काममा अग्रणी भुमिका खेलिन्। २०४६ सालतिर घिमिरे दम्पत्तीले तामाकोशी सेवा समिति स्थापना गरेर रामेछाप जिल्लाका गरीब जनताको आर्थिक जिवनस्तर सुधार्न सक्रिय भए। यसक्रममा क्रियाशील जगदीश र दुर्गा घिमिरेमाथि राजनीतिक-सामाजिक विरोधीहरूको प्रहार पर्नु त स्वभाविक हो। तर घिमिरे दम्पत्तीमाथि अर्को आक्रमण पनि भयो जब जगदीशलाई 'माइलोमा' भन्ने रत्तक्यान्सर भयो। त्यसको उपचारको क्रममा भोग्नुपरेको दुःख-कष्टको मार्मिक वर्णन घिमिरेको पुस्तक 'अन्तर्मनको यात्रा'मा छ। तर जगदीशले रोगलाई पनि पछारे। यो भयावह रोगको आक्रमणपछि पनि उनमा वैराग्य र विचलितमनस्कता देखिएन। क्यान्सर भइसकेपछि पनि घिमिरे साहित्यिक सिर्जना र सामाजिक विकास अभियानमानै यथावत सक्रिय रहे।
घिमिरेको ६८ वर्षको उमेरमा २०७० कार्तिक १४ गते काठमाडौंको ओम अस्पतालमा निधन भयो। घिमिरेको अन्त्येष्टी काठमाडौंको पशुपति आर्यघाटमा भयो। घिमिरेका श्रीमती दुर्गा घिमिरे छोरा हिमाल घिमिरे र छोरी जुन घिमिरे छन्। 
उपन्यास, कथा, नाटक आदिका पुस्तक लेख्दै आएका घिमिरेका प्रकाशित कृतिहरूः
लीलाम (उपन्यास, वि.सं. २०२७)
जगदीशका कथाहरू (कथासङ्ग्रह, वि.सं. २०२७)
साबिती (उपन्यास, वि.सं. २०३२)
केही कथा कविता र संस्मरण (विविध, वि.सं. २०३४)
सन्तान (नाटक, वि.सं. २०३५)
अन्तर्मनको यात्रा (आत्मकथा, वि.सं. २०६४)
अग्निसूत्र (कविता, वि.सं. २०६५)
स्थान काल पात्र (विविध/गद्य, वि.सं. २०६६)
सकस (महाख्यान, वि.सं. २०६९)
बर्दी (रोजा कथाहरू)
चेतना भया (रोजा राजनितिक टिप्पणीहरू)
छ्यासमिस (रोजा लेख र अन्तरवार्ताहरू)
सम्पादित, अनूदित र फुटकर कृति
नेपाली, कवितायें -हिन्दी-संयुक्त सम्पादन
विभिन्न पत्र-पत्रिकाहरूमा कथा, नाटक, लेख, निबन्ध प्रकाशित
उनको कृति अन्तर्मनको यात्राले वि.सं. २०६४ सालको मदन पुरस्कार पाएको हो। घिमिरेले मैनाली कथा पुरस्कार पनि पाएका छन्। यस्तै उनले अन्तर्मनको यात्राकै लागि उत्तम शान्ति पुरस्कार पनि पाएका छन्।
↑ "जगदीश घिमिरे र राजनिति", अन्तिम पहुँच २९ जुलाई २०१३।
↑ साहित्यकार जगदीश घिमिरेको निधन, आर्यघाटमा अन्त्येष्टि गरिने नागरिक न्यूज
↑ साहित्यकार जगदीश घिमिरे रहेनन् सेतोपाटी अनलाईन
↑ साहित्यकार घिमिरे रहेनन् रातोपाटी अनलाईन
↑ "जगदीश घिमिरे"।
↑ जगदीश घिमिरेद्वारा लेखिएका पुस्तकहरू "जगदीश घिमिरेका लेखहरू", अन्तिम पहुँच २९ जुलाई २०१३।
↑ [घिमिरेलाई मदन र पराजुलीलाई जगदम्बा "जगदीशलाई मदन पुरस्कार", अन्तिम पहुँच २९ जुलाई २०१३।
जगदीश घिमिरेका रचनाहरू (मझेरी डट कममा)
"https://ne.wikipedia.org/w/index.php?title=जगदीश_घिमिरे&oldid=994001" बाट अनुप्रेषित
अन्तिम सम्पादन ७ फेब्रुअरी २०२१, ११:५५
यो पृष्ठलाई अन्तिमपटक ११:५५, ७ फेब्रुअरी २०२१ मा परिवर्तन गरिएको थियो।